�Shirka Dib-uheshiisiinta Qaran�: Ruwaayad si xun loo alifay
Axmd Cali M. Khayre
Waxaa maalmahaan la hadalhayaa in magaalada Muqdisho lagu qabanayo shir loogu yeeray mid dibuheshiineed oo ay isugu imaanayaan qabiilooyinka Soomaalidu. Shirkaas waxaa lagu sheegay inuu yahay mid qabiilooyinka lagu heshiisiinayo balse uusan wax siyaasad ah shaqo ku lahayn.
Dowladda KMG ah oo Imbagaati lagu soo dhisay oo markii hore diidday in ay wax wada hadal ah la gasho kooxaha ka soo horjeeda ayaa cadaadis badan oo dibadda iyo gudahaba ah ka dib garowsatay in ay lagama maarmaan tahay in la qabto shir, kadib markii ay ogolaansho ka heshay dowladda Itoobiya oo ah awoodda sida dhabta maanta uga talisa Soomaaliya oo dhan si dadban ama si toos ahba. Wuxuuna Madaxweynaha DFKM C/laahi Yuusuf ku dhawaaqay in ay shir ku qabanayaan dalka gudhiisa isagoo jooga magaalada Addis Ababa oo ah meesha inta badan go�aannada muhiimka ah looga soo yeeriyo mas�uuliyiinta DFKM ah.
Qormadan gaaban waxaan ku eegaynaa shirka la sheegay in lagu qabanayo Muqdisho iyo arrimaha ku xeeran. Haddii Mas�uuliyiinta DFKM ahi iyo Guddiga qabanqaabaduba ay marar badan ku celceliyeen in ay fashilmeen 14kii shir ee kan ka horreysay oo aan laga gaarin dibuheshiisiin, shirarkaas oo uu ugu dambeeyay Imbagaati ee lagu soo dhisay DFKM ah, ma yahay shirkani mid dib u heshiisiineed oo dadka Soomaaliyeed ay u aayaan? Maxayse noqon kartaa natiijada kama dambeysta ah ee laga fili karo?
Ka qaybgalka shirka hab qabiil
Waxaa la shaaciyey in shirka �bib u heshiisiinta� looga soo qayb gali karo hab qabiil oo keli ah oo ayna jirin cid matali karta koox siyaasadeed, diineed ama si madax banaani ah uga soo qaybgali karta.Qofkasta oo imaanaya waxaa la yiri waa in uu soo gashadaa shaatiga qabiilka. Arrinkan ayaad moodaa in loogu talo galay in umadda Soomaaliyeed dib loogu qaybiyo lana baa bi�iyo iskaashiga siyaasadeed oo aan ku dhisnayn qabiilka. Sida la wada ogyahay khilaafka Soomaaliya ka jira waa mid siyaasadeed oo ay isku hayaan shaqsiyaad iyo kooxo siyaasadeed oo mar mar adeegsada qabiilka. Haddii taariikhda dib loo raaco waxa aad arkaysaa in dagaalada Soomaaliya ka dhici jirey in ayna ku salaysnayn qabiil ee laysku qabsan jirey biyo,daaqsin ama khilaaf kale oo deegaanka khuseeya. Inta badan dagaaladaas waxa ay u dhexeeyeen dadka isla daga, haddii ay isku qabiil yihiin iyo haddii kalaba. Laga bilaabo markii la qaatay xorriyadda oo Soomaaliya yeelatay dowladdii ugu horreysay oo meel dhexe laga maamulayo dalka dhan ayaa jagooyinkii iyo wax dheefka dowladda waxa ay badashay biyihii iyo daaqii lagu dagaali jirey. Ka helidda jago sare oo dowladda ayaa noqotay helitaan dhaqaale badan oo la lunsado oo mar mar laga yaabo in uu qabiilka wax ka gaarto. Waxa kale oo helidda jagooyinka sare oo dowladda ku lammaansanaaday ku takri falidda awoodda iyo hantida dowladda.
Doorashadii ugu dambaysay oo xorta ahayd oo ee dalka ka dhacday 1967dii waxaa ka qaybgalay 62 xisbi siyaasadeed inta badan ku dhisan qabiil oo soo sharaxday 1002 oo qof si ay ugu tartamaan 123dii kursi oo baarlamaanku lahaa. Ururadaas waxaa dhistay shaqsiyaad jagooyin rabay oo qabiilkana isticmaalayey. Isku daygii afgambigii ugu horeeyey ee Somaliya lagu sameeyey dowladdii milatariga ahayd waxaa sameeyey saraakiil ka soo jeeday hal qabiil, waxaana cad in ujeedkoodu ahaa in ay lawareegaan awooda dalka iyo wixii faa�iido ah oo la socota. Saraakiishaas iyaga ayaa damacu ku jirey laakiin kuma socon talo qabiil. Jabhadihii kale oo samaysmay iyagana waxaa abaabulay saraakiil ama shaqsiyaad kale oo abaabulay qabiilkooda, si ay u qabsadaan ama qayb uga helaan hantida qaranka oo la dhacayo. Waa laga yaabaa in ay jiraan shaqsiyaad dagaalka u galay ujeedo kale laakiin waxaan ka hadlayaa meesha loo badan yahay. Dagaaladaas oo dhan waxa ay ahaayeen kuwo ay abuureen siyaasiyiin u tartamayey jagooyin ee ma ahayn qabiilooyin is neceb oo sidaas u dagaalay. Marka xal larabana waa in siyaasiyiinta la heshiisiiyo, ileyn waxa dagaalsan oo qabiilka isticmaalayey waa ayagee.
Waqtiga hadda la joogo, DKMG ee Kenya lagu soo dhisay waxaa laga buuxiyay oo jagooyinka ugu muhiimsan lagu dhoobay qabqablayaashii dagaalka iyo xulufadoodii oo ku bahoobay xisbigii SRRC oo lagu dhisay dalka Itoobiya. Xisbigaas oo loo dhisay in lagu burburiyo dowladdii KMG ahyd oo markaas jirtay. Waxaa muhiim ah in la ogaado in isbaheysigii SRRC qabqableyaashii dagaal ee ku midoobay aysan isku keenin hayb qabiil, balse uu isku keentay danahooda gaarka ah iyo damacooda waashay. Laakiin haddana waxay adeegsaneeyn qabyaalad iyagoo isku muujinayay iney ka shaqeynayaan danta qabiilkooda oo ay u raadinayaan xaq ka maqan.
Kooxaha isbahaysi oo samaysmay waxaa kale oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo intooda badani ay hadda Eretria joogaan, kuwaasoo iyagu ku dooda iney ka soo horjeedaan faragelinta Itoobiya ay ku hayso Soomaaliya, walow iyaga ruuxoodu ay qayb ka yihiin siyaasiinta isbedbedela oo ay dabeyshu u waddo marba meesha ay dantoodu jirto. Kooxdaasna waxa ay iskula socdaan dan ee iskuma keenin xigto qabiil. Waxaa kale oo jira Maxaakiimta Islaamiga ah oo iyana ah xisbi taageero badan ka haysta qaybo kamid ah bulshada Soomaaliyeed, iskulana socda mabda� diineed.
Kooxahaas aan kor ku soo xusnay midna kuma dhisna isbaheysi qabyaaladeed. Waxa kale oo jira shaqsiyaad aqoonyahanno ah ama siyaasiyiin aan kooxna ka tirsanayn oo aanna rabin in ay dallad qabiil ama koox hoos galaan. Waxaa intaas dheer in ayna jirin qabiil Soomaaliyeed oo siyaasadda ku midaysan oo qabiil ama jufo kasta ay kala jaban yihiin oo ay kooxaha siyaasadda ku kala xiran yihiin.
Shirkan sida muuqata waxaa laga casuumayaa qabiilka qaybtiisa taageersan fikirka kooxda abaabulaysa shirka la sheegay in lagu qabanayo Muqdisho. Madaxda Dowladda KMGka ah iyo gudiga qababqaabaduba waxa ay ku celceliyaan in 14kii shir oo hore oo loo qabtay siyaasiyiinta iyo kooxaha in ay guuldaraysteen hadana loo baahanyahay in shir qabiil la qabto. Shirarkaas ay sheegayaan waxaa ku jira kii Imbagaati oo lagu soo dhisay dowladda ay sheeganayaan. Haddii la raaco qaabka fakarka sidaas ah waxa ay noqonaysaa in la qiro in ay fashilantay wixii ka soo baxay shirkii Imbagaati oo Soomaalida oo siman hab qabiil loo shiriyo. Haddii ay ka tanaasulaan jagooyinka ay sheeganayaan oo hab qabiil uga soo qaybgalaan shirka, doodoodu waxa ay noqon lahayd mid macquul ah. Waxa kale oo guddiga qabanqaabada iyo dowladduba ku celceliyaan in qofkasta oo Soomaali ahi qabiil ka tirsan yahay oo uuna jirin qof ka madax bannaan. Su�aasha dhalanaysa ayaa ah, iyaga naftooda sow kuma jiraan dadka qabiilka ka tirsan, ma yeelayaan in ay ku yimaadaan magaca qabiiladooda? Mase ujeedadu waa anaga waxaan ahaanaynaa koox siyaasadeed inta kalana qabiil haloo kala qaybiyo. Doodaasna waa mid gurracan oo aan socon karin.
Waxa ay u muuqataa in dowladda Itoobiya, oo hadda dhab ahaan haysata awoodda dalka Soomaaliya, ay ku adkaysanayso in hab qabiil oo keliya looga soo qayb galo shirka. Dadka Itoobiya oo kala luqado iyo qowmiyado duwan waxaa la rabaa in la yiraahdo waa mid, dadka Soomaaliyeed oo wadaaga wax kastana in jufo jufo loo kala qaybiyo. Dabinkan oo kale waxaa loo maleegay madaxdii ururkii xoriyad u dirirka ahaa ee Koofur Afrika ka dhisnaa ee ANC. Caddaanka tirada yar oo dalka haystay oo iskugu jira dad ka kala yimid dowlado kala duwan, laakiin rabay in ay hal ahaadaan oo loo aqoonsado caddaan ayaa waxa ay rabeen in ay dadka madowga ah u kala qaybiyaan qabiilooyin iyo dowlado yar yar.
Ururka ANC waa fahmay arrinkaas si fiican ayeyna gaashaanka ugu daruureen. Meles Zenawi uma malaynayo in uu yeelayo dadka Itoobiya qabiil ha loo kala saaro oo khilaafaadka ka jira haloo heshiisiiyo. Dalka Itoobiya jabhadaha ka jira awalna ka jiray waxa ay ku salaysnaayeen qabiil sida kuwa Soomaaliya oo kale mana ogola in qabiil ama qowmiyad loo wada hadlo. Soomaalidna waxa uu rabaa in uu kala qaybiyo si ayna u imaan dowlad midaysan oo awood leh. Dadka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa in ayna yeelin hagardaamadaas oo aan caadifadda qabiilku ka tan badin.
Sida muuqata ujeedadu waa in dadka Soomaaliyeed la geliyo jawi kala qaybsanaan iyo kala shaki qabyaaladeed taasoo wiiqeysa awoodda iyo wadajirka umadda, si kooxda Imbagaati ay u helaan kaaba qabiillo u sacbiya si aduunkana loogu tuso in dowladdu haysato taageeragda shacabka. Laakiin waxaa fiican in ay fiiriyaan mirihii ay dhaleen kala qaybinta iyo sacabka bilaashka ah oo waqtiga dheer la tumayey.
Meesha shirka lagu qabanayo
Marka shir loo qabanayo kooxo iska soo horjeeda, waxaa kamid ah qodobbada ugu muhiimsan in la helo meel dhexdhexaad ah oo aan qolo ka mid ah kuwa is haya ayna haysan oo si toos ah loogu wada hadli karo. Magaalada Muqdisho oo lagu qabanayo shirka �dib-u heshiisiinta� waxa jooga ciidamo Itoobiyaan ah oo dalka sharci darro iyo xoog ku jooga oo haysta. Waxa kale oo jooga malayshiyo ay leeyihiin mid ka mid ah kooxaha siyaasadda isku haya. Waa arin aan soconayn caqligana galayn in kooxaha ka soo horjeeda joogitaanka Itoobiyaanka dalka in laga filo in ay ka qaybgalaan shir lagu gabanayo taangiyada Itoobiyaanka hoostooda. Waa sahlan tahay in afka laga yiraahdo anaga ayaa amaanka balan qaadayna, laakiin weli taariikhda ma dhicin in kooxo iska soo hojeeda lagu wada hadashiiyo meel ay mid kamid ahi ka taliso. Sida kaliya oo Muqdisho uu uga dhici karo shir miro dhal noqon kara waa in ciidamada dalka kusoo duulay laga saaro, laguna soo badalo kuwo adduunku soo diray. Ciidamadaas dhexdhexaadka ahina ay sugaan amaanka ka qaybgalayaasha shirka iyo madasha lagu qabanayo intaba.
Haddii taas aan la helin ma dhici karo shir laga fili karo in lagu xaliyo khliaafka siyaasadda Soomaaliya.
Madax bannaanida gudiga qabanqaabada shirka
Waxaa shirka guddoomiye looga dhigay Cali Mahdi oo sheegay in uu u madax bannaan yahay shirka qabashadiisa iyo casuumaadda cidda ka soo qaybgalaysa. Marka la rabo in la qabto shir dhexdhexaad ah waxaa laga rabaa in uu soo buuxiyo shuruudo ay ka mid tahay dadka abaabulaya ama fududaynaya shirka waa in ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo u siman dhinacyada kala duwan iyo in qaybaha la dhexdhexaadinayo ay soo magacowdaan dadkii uga qaybgali lahaa shirka kuna wada qanacsanyihiin guddiga dhexdhexaadinta. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la sii caddeeyo waxyaabaha looga wada hadlayo shirka iyo natiijada kama dambaysta ah oo la rabo in laga gaaro. Shirkaan ma soo buuxin shuruuradaas oo dhan, umana muuqdo mid dhexdhexaad ah sababaha soo socda owgood. Tan koowaad, guddiga qababqaabada waxaa magacaabay dowladda KMG oo ah koox ka mid ah kooxaha la rabo in la heshiisiiyo kamana haystaan kalsooni kooxaha kale. Macquul ma ahan in kooxo is haya mid kood uu magacowdo qaalligii kala saari lahaa. Tan kale ka qaybgalka shirka iyo cidda loo ogolyahay waxaa ka hadla oo go�aamiya madaxda Dowladda KMGka iyo Dowladda Itoobiya. Dhowr goor ayaa Ra�isul wasaaraha Itoobiya waraysiyo uu dhiibay ku sheegay cidda loo ogolyahay iyo tan aan loo ogolayn ka qaybgalka shirka. Waraysi uu dhiibey Cali Mahdi ayaa la weydiiyey in maamulada goboleedyada dalka ka jira ay uga qaybgalayaan hab maamul ama hab qabiil. Cali Mahdi waxa uu ku jawaabay �arinkaas waa mid siyaasadeed waxaana la weydiinayaa dowladda kumeelgaarka ah�. Jawaabtan ayaa ku tusinaysa in ayna jirin madax banaani oo uu shirku yahay mid ay kooxu qabsanayso. Waxaa kale oo hadda la xaqiijiyey in maamulka lamagacbaxay Puntland uu soo xushay ergo shirka uga qaybgasha hab maamul oo ay caddeeyeen. Taasna waxa ay sii burrinaysaa fikirkii ahaa waa in hab qabiil looga soo qaybgalaa shirka. Gobolada kale waxaa laga rabaa in madaxda qabiilladu ay soo xulaan oo aan maamulka gobolku shaqo ku yeelan dadka ka soo qaybgalaya shirka.
Sida muuqata ujeeddooyinka shirkan loo qabanayo waa in adduunka looga dhaadhiciyo in dowladda loo dhan yahay si loo helo dhaqaale, una hirgasho in hal koox xukunka dalka u haysato. Kala qaybinta qabiilka ee dadka Soomaaliyeed mar kale iyada oo laga leeyahay ujeeddo gaaban, waxa ay reebaysaa cawaaqib xumo waqti dheer socota iyo qalqal siyaasadeed oo horleh. Dalka Soomaaliya waxaa haysta ciidan cadow oo kusoo duulay, waxaana adkaanaysa in xal siyaasadeed la gaaro inta ay ciidankaas dalka ku sugan yihiin. Dadka Soomaaliyeed waa kasoo daaleen maamul xumo iyo ruwaayad.Waxaa loo baahan yahay in laga fakaro sidii loo heli lahaa dowlad loo wada dhan yahay oo ku dhisan caddaalad iyo awood qaybsi hufan. Dowladdaas waa in hoggaan looga dhigaa dad aan dambi ka galin umadda lehna karti iyo aqoon ay dalka ku maamulaan. Si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah in lafuliyo arimaha soo socda:
In dalka laga saaro ciidamada Itoobiya oo sida sharci darrada ah ku soo galay sida ugu dhaqsaha badan iyada oo aan lagu xirayn wax shuruud ah. laguna badalo ciidan ka socda waddamo dhexdhexaad ka ah arimaha Soomaaliya. Haddii la yiraahdo ciidamada Itoobiya ma baxayaan iyada oo aan amaan lahelin, oo aan ammaanna imanayn iyaga oo jooga , taas macneheedu waxa uu noqonayaa ciidamada Itoobiya weligood ha joogeen, dalkana ha haysteen.
In la qabto shir dib-u-heshiisiineed oo dhab ah oo loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kooxaha siyaasadda.Waxaa lagama maarmaan ah in xooxaha siyaasadda isku haya laysku keeno, lagana soo qaybgaliyo cidkasta oo wax ka qaban karta arimaha Soomaaliya oo qasan. Haddii DKG ah ay ku adkaysanayso shirarkii hore waxba kama soo bixin waa in ay iyagana ka tanaasulaan jagooyinka ay sheeganayaan si simanna looga hadlo arimaha dalka.
In laga hadlo dambiyadii ka dhanka ahaa xuquuqda aadanaha oo ka dhacay dalka Soomaaliya oo ay ugu dambeeyeen xasuuqii shacabka loogu gaystay Muqdisho bilowgii sanadkan, lagulana xisaabtamo shaqsiyaadkii ka dambeeyey. Haddii aan shaqsiyaadka dambiilayaasha ah lala xisaabtamin waxaa imaanaysa in dambigii ay galeen loo saariyo qabiilkooda, taas oo keeni karta cawaaqib xumo iyo raadin aarsi joogto ah.
Faafin: SomaliTalk.com | July 15, 2007